Philosophy Kunze Kwezvakasikwa Dhizaini
Kugadzirwa kwepasirese ipfungwa iyo yanga ichikura mukuzivikanwa kubva kunopera ma1990. Iyo dhizaini dhizaini inokurudzira dhizaini yenzvimbo uye chigadzirwa zvinhu izvo zviri kufambidzana kumunhu wese. Zvechivanhu "vakaremara kufambidzana"nzvimbo uye tekinoroji inogadziriswa ndiyo inokonzeresa kune vakuru veiyi dhizaini yekugadzira. Kazhinji, izvi zvinotadzisa mashandiro enzvimbo nemidziyo uye inenge isingafadzi kwese inogona kugovaniswa nevanhu vese kugona.
Mimwe mienzaniso yekugadzirwa kwepasirese munzvimbo dzinosanganisira:
Masuo ane levers pane ane mapfundo ekuvhura akakodzera kune avo vane nyaya nekubata. Ndichiri kurerutsa mashandiro kune chero munhu akatakura rinorema kana zvinhu zvakakura. Levers dzakadai dzinowanzo kuwanikwa mumhando dzakasiyana siyana dzinoyevedza.
Mapindiro akapfava uye akapamhama anoita zvinogoneka kune vanhu vane kufamba kukanganiswa kwekuwana nzvimbo isina ramp. Izvi zvinopa kupinda kuri nyore kuvabereki vevana vadiki mumachira, uye kurerutsa iyo chinja yemidziyo nemidziyo.
Linear chivakwa marongero anopa akajeka mutsara wekuona uyo unobatsira vanhu vane kutaurirana kunetseka. Kufanana kunobatsira yakagadziridzwa kuvhenekera, izvo zvinobatsira kune wese munhu, kunyanya avo vane dambudziko rekuona.
Mienzaniso yeUniversal Dhizaina mune Zvigadzirwa
"Rocker" switch switch inopa oparesheni yakareruka uye inobvumidza mukana wekutanga kune vanhu vane mota dzakanaka matambudziko.
The Cuisinart brand chikafu processor iri pakati pezvigadzirwa zvine mukurumbira zvinosanganisira zvakasikwa zvevakuru, uye zvinhu masimba makuru ane makuru, akajeka mavara anodzora kuomarara mukicheni, uku achifambisa mashandiro nevanhu vane yakanaka mota zvinetswa.
Firosifera iri shure kweiyi yakakosha zvekuti inenge isinganetse kuisa mukati imba nyowani kuvaka. Zvimwe zvinhu zvekugadzira zviri kukurudzirwa kuburikidza nemitero inokurudzirwa, kana kutemerwa nemutemo. Dzimba dzakavakwa nevakuru vezvigadzirwa havafanirwe kuchinjiswa zvakanyanya. Kana uye kana iwo huwandu hwevagari vemo hwekugona kwavo kwemuviri ukachinja, uye nadzurudzo ikava inodikanwa, ivo vakashongedzerwa zvirinani. Semuenzaniso, dzimba zhinji dzakagadzirwa nepasirese dzine madziro akavakwa nematanda akapamhamha, zvichibvumira kumisikidzwa kwakasimba kwemabhaji-mabhagi uye zvimwe zvigadzirwa zvakavakirwa pamadziro pasina kudiwa kwekusimbiswa. Izvi inoderedza mari izvo zvinowanzo kuwira kuzvirongwa zveveruzhinji zvinosanganisira Medicare neMedicaid.
Nhoroondo Yezvakasikwa Dhizaini
Dhizaini yepasirese ine midzi yayo muna 1947 apo ane makore gumi nerimwe ekuberekwa anonzi Marc Harrison akatambura huropi hunoshungurudza kuipa kuti kunodiwa yakakura kurapa kumubatsira kuti adzidze zvakare zvakakosha mabasa. Ichi chiitiko chakafuridzira Harrison kuti awane MFA mukugadzirwa kwemaindasitiri. Akatanga kushanda kusanganisa aesthetic uye inoshanda dhizaini nenzira iyo yanga isati yambofungidzirwa.
Harrison ndiye munhu chaiye anokonzeresa dhizaini yeCuisinart chikafu processor, uye kusvika kudzika kwake muna1998, akaramba achishanda pane chirongwa chinonzi Universal Kitchen. Pfungwa iyi yaiitirwa kuvandudza mashandiro ekicheni nzvimbo yekudzikisa huwandu hwekukombama, kusvika, uye kumonyanisa izvo chinodikanwa nemaitiro echinyakare. Harrison anoonekwa semunhu mukuru mukuzvarwa kwazvino dhizaini.
Ndokumbirawo uongorore zvinotevera zviwanikwa kuti uwane rumwe ruzivo nezve wepasi rose dhizaini mune dzidziso uye maitiro:
Mukuru Kugara Nhaurirano hurukuro kubva kuNPR pakuvaka nekusarudza dzimba dzinokodzera kuchembera mukati. Saiti zvakare inosanganisira yakanyorwa shamwari nyaya.
Iyo Center Yezvakasikwa Dhizaini Kupa runyorwa rwe nhau zvinhu, zvinyorwa, uye zvirongwa zvinotarisana nepasirese dhizaini dhizaini.
Yese Yakasikwa Dhizaini Ichi chinyorwa chinotarisa maitiro ekugadzira shawa iyo kufambidzana uye inoshandiswa kune vanhu vakawanda.
Yenyika Yese Dhizaina Kicheni Kabineti Ichi chinyorwa chinopa zano pane zvakasikwa dhizaini yemakicheni makabati.
Yese-Generation Kumba Gwara .
Chii Chinonzi Dhizaini Yese? Iyi 2-peji PBS yekutanga inopa kosi yekukanganisa mukuita dzimba dziwane pekugara.
Yese Yakasarudzika Dhizaini Rabhoritari Inotsvaga Kuputsa Zvipingaidzo Ichi chinyorwa chinobva kune yekushambadzira indasitiri bhuku inokurukura imba yakavakwa nemugadziri anoshandisa wiricheya. Vamwe vavaki uye vashanyi vekumba vanokokwa kuzoona imba kuti vadzidze nezve dhizaini chaiyo.
Iyo Northwest Universal Dhizaini Kanzuru Saiti ino iine muunganidzwa wakakura weruzivo rwevaki vekumba nevatengi, kusanganisira cheki yekutarisa, uye zvinowoneka panzvimbo dzenhamo dzekucherechedza mune dzinenge dzimba dzese dziri mumba.
Yese Dhizaini Zvigadzirwa Rondedzero yezvishandiso kune avo vanofarira kutenga kana kuvaka imba yakagadzirirwa pasi rose, kusanganisira zvinongedzo kunzvimbo dzekuronga, mabhuku, nezvimwe.
Kuchembera munzvimbo, Nenyasha, NeZvese Dhizaini Ichi chinyorwa chinosanganisira zvikamu zvinotarisana nekutengesa tsika, kutema mari, uye kubhadhara dzimba dzakagadzirwa nepasi rose.
Yese Dhizaini Dhizaina Kicheni Matipi Iyi GE inoenzanisira inoratidza kuti nzvimbo ingagone sei kugadzirisa zvishandiso mukicheni-yakagadzirirwa kicheni.
Kwete Zve maWheelchair chete: Iyo Resource Gwara kune Universal Dhizaini Iyi webhusaiti inotsanangudza chirongwa chepasirese dhizaini yeOhio State University, uye inosanganisira akati wandei emavhidhiyo kesi zvidzidzo zvinoratidza nzvimbo dzakashanda pamwe nadzo.
Kuunza Égalité Kumba ichi New York Times chinyorwa chinotaurira nyaya yemurume mumwechete yekushanya mukuvakazve imba yemakore makumi maviri ekubatanidza masisitimu ekugadzira epasirese
Iyo Pfungwa yeUniversal Dhizaini Ichi chinyorwa chinoratidza musiyano uripo pakati pezvose zvakagadzirwa, uye kufambidzana patani.
Kuchembera munzvimbo uye zvakasikwa dhizaini zviwanikwa Iri gwaro rePDF kubva kuCalifornia Department of Housing uye Nharaunda Dzekusimudzira runyorwa rwezvinhanho-zvepasirese zviwanikwa zvevanhu vari kutsvaga rubatsiro nekugara mudzimba dzavo sezvavanokwegura.
Yakagadzirirwa Hupenyu Montgomery Iyi webhusaiti inoratidzira modhi dzimba dzakavakwa muMontgomery County, Maryland.
WELLcome Musha Saiti iyi kubva kuBall State Yunivhesiti inopa dzinoverengeka dzakakwana dzedzidzo dzeyese dhizaini yekufungisisa mumba. Izvo zvinofanirwa kune vagadziri uye vavaki.
Kurarama Laborator Saiti ino inoratidzira kuedza kwemumwe mukadzi kuvaka imba yekumugarisa kuremara pamwe nezvinodiwa nemhuri yake.
Institute for Yemunhu Yakananga Dhizaini Iyi Boston-based Non-Governmental Organisation iri kutsvaga kuenderera mberi nepfungwa yekugadzirwa kwepasirese pasirese.
Kugadzirisa Imba uye Zvese Deisgn Chinyorwa kubva kuAARP icho chinopa matipi ezvepasi rose dhizaini yekufunga mukugadzirisa imba.
Yese uye yeGreen Chinyorwa kubva kuPlumbing & Mechanical Magazine ichitarisa kubatanidza tekinoroji yakasvibirira neyekugadzira kwese.
Nhungamiro Yekutenga Imba: Tungamira kubva New Horizons Unlimited, iyo inosanganisira matipi ekugadzira, kugadzirisa, uye kushanda nemakontrakta.
Kana iwe ukaona ichi chinyorwa chichibatsira, ndapota sununguka unzwe kuti ubatanidze kana kuishandisa zvakare. Zvese zvatinokumbira ndeyekuti chikwereti chidzokere kune yedu saiti. Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri na 1800wiricheya; tinopa tora mabhawa, yakakwidza chigaro chimbuzi,wiricheya yekugezera, & trapeze mbariro.